Shiinaha Warshad Tile Graphite iyo shirkado cusub | Hexi
Foornada loo yaqaan 'Graphite' waxaa loo qaabeeyey oo dib-u-habayn ku samaysay Shirkadda Hexi cilladaha kharashka sarreeya iyo nolosha muddada gaaban ee madaxa naxaasku ka samaysan yahay foornada korontada ku jirta. Foornada tabinta ah ee loo yaqaan 'Graphite conductive' ayaa loo isticmaalaa halkii laga isticmaali lahaa foornada korontada ee madaxa naxaasta ah waxaana lagu dhejiyaa foornada korantada ee 6.3 MVA. Natiijo ahaan, nolosheeda adeeggu way dheertahay, tirada joogsiyada kulul ee foornada ayaa si weyn loo yareeyay, iyo qiimaha wax soo saarka si weyn ayaa loo dhimay.
Tawxafka loo yaqaan 'Graphite tile' ayaa loogu magac daray qaabkiisa, kaas oo la mid ah foornada loo isticmaalo dhismahayaga. Tani waa magac dad. Tilega garaafka ayaa iska leh kala soocidda baloogga garaafka. Tufaaxa Graphite waxaa loo qaybin karaa dhowr fasallo iyadoo loo eegayo shuruudaha kala duwan ee iska caabbinta iyo ku xirnaanta isticmaalka. Sababtoo ah habka waxsoosaarka ee alaabada garaafku waa isku mid, tusmooyinka jirka iyo kiimikada ee shaashadda garaafku waxay tixraaci karaan tilmaamaha jireed iyo kiimikada ee koronto garaafka loo isticmaalo dhalaalka birta
Waxaan beeraa soo-saarid muddo-dheer ah iyo farsamaynta tiles-yada garaafka iyo alaabada kale ee garaafka. Wax soo saarku wuxuu leeyahay astaamaha kaarboonku badan yahay, baaruud hoose iyo ash hoose, iska caabin hoose, cufnaan sare iyo iska caabin qiiqa. Waxaana si ballaaran loogu adeegsan karaa deegaanno heer kulkeedu sareeyo. Qalab kala duwan ayaa la dooran karaa, oo ay ku jiraan hal-dhejis iyo laba-dubis, laba-farood iyo saddex-dhuuq iyo afar-dubis. Cufnaanta alwaaxa: 1.58-1.65-1.70-1.75-1.85.
Hexi Carbon Co., Ltd. waxay soo saari kartaa shaxan garaaf ah oo qeexitaano kaladuwan leh sida waafaqsan shuruudaha iyo sawirada macaamiisha. Ku soo dhowow inaad iibsato!